किताब पढ्नुका फाइदाहरु र केही पढ्ने तरिका – POSITIVE SANSAR
किताब पढ्नुका फाइदाहरु र केही पढ्ने तरिका
आजको यो युगमा हामि सत्य संग भाग्न सक्दैनौ। यदि तपाई एउटा प्रभावशाली लिडर बन्न चाहानुहुन्छ भने किताब पढ्नुका फाईदा जान्न जरुरि छ। यसले तपाईको बुद्धिको बिकास गर्न सहयोग गर्छ।
मानिसहरु नापढ़नुको सजिलो कारण समयको अभाब बताउछन तर यदि तपाइँ यसमा थोरै सोच्नुहुन्छ भने तपाइँ आफ्नो कुनिउ पनि समय (बिहान, बेलुका,सुत्नु भन्दा अगाडी, यात्राको समयमा) निकालेर जहा कहिँ तपाइँ किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। आज हामि तपाईलाई केहि reading benefit बताउन जादै छौ, ध्यान दिएर पढ्नुहोस् र सधै थोरै भए पनि पढ्ने बाणीको विकास गर्नुहोस् ।
किताब पढ्नुका फाइदाहरु
• पढ्ने बानीले दिमागलाई सधै युवा/ जवान बनाइराख्छ
• पढ्ने बानीले तपाइले प्रयोग गर्ने शबदावालीमा सुधार ल्याउछ
• पढ्ने बानीले तपाईलाई प्राप्तीमा प्रोत्शाहित गर्छ
• पढ्ने बानीले तपाईलाई अझ धेरै समझदार बनाउछ
• पढ्ने बानीले तपाईलाई नयाँ नयाँ कुराहरु सिकाउछा र तपाईलाई तपाईका साथी भन्दा एक कडाम अगाडी रखाद्छ ।
अब भन्नुहोस् आफ्नो leadership को क्षमतालाई बढाउन सबै भन्दा सजिलो उपाय के छ ? यसलाई अझै सजिलो कसरी बनाउने?
केहि राम्रो र तपाईला मन पर्ने लेखकलाई खोज्नुहोस्, (जस्तै शिव खेरा, चेतन भगत पिटर ड्रकर, सुबिन भट्टराई आदि) संसारकै प्रिय र आकर्षित पार्ने लेखक खोज्नुहोस्। उनलाई पढेर तपाई कहिले गलत बाटोमा लाग्नु हुनेछैन। एउटा समय बनाउनु होस्, तपाईलाई मनपर्ने वा सजिलो लाग्ने लेखकलाई follow गर्नुहोस् र उनकै सिद्धान्तमा हिड्नुहोस। यसो गर्नाले तपाईलाई पनि बिस्तारै किताब पढ्नुको आनन्द मिल्नेछ।
कुनै राम्रो blogs खोज्नुहोस् । आजको युगमा विद्धानहरुले लेखेका प्रभावशाली bolgs पनि सजिलै भेट्न सकिन्छ । थोसै अभ्यास गर्नुहोस् दिमागलाई विकास गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका हो अभ्यास। यसलाई प्राप्त गर्न कुनै MBA गर्न कुनै degree लिन जरुरि छैन. सानो तिनो Leadership management को course गर्न सक्नु हुन्छ ।
तपाइले आफ्नो daily जीवनमा गर्ने कामहरु मध्धे पढ्न एक महत्वपूर्ण काम बनाउनु भयो भने तपाई ज्ञान हुनेछ र तपाई एक leader बन्न सक्नु हुने छ। आफुलाई रुची लाग्ने समयमा पढ्नुहोस् ।
धेरै travell गर्नु हुन्छ भने Bus मा बसेको समयमा पनि पढ्न सक्नु हुन्छ । नजिकको पुस्तकालयमा पढ्न गयो भने तपाईको पुस्तक किन्ने पैसा पनि बच्यो र आपनो इच्छा लागेका सबै किताब पनि पढ्न पाउनु भयो ।
पढ्नको लागि माथि उल्लेखित तरिकाहरु तपाईलाई लाभदायक बन्नेछन।विश्वास गर्नुहोस् पढ्नु एउटा leadership management गर्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। नपढ्नको लागि बाहाना बनाउन बन्द गर्नुहोस्। सधै पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस् अनि मात्र तपाई एक असल ज्ञानी र राम्रो leader बन्न सफल हुनुहुनेछ।
यथार्थ मन छुने लाइनहरु संग्रह – पहिलो
यथार्थ मन छुने लाइनहरु संग्रह – तेस्रो
उच्च प्रभावशाली व्यक्तिहरूको ७ बानिहरू- जस्ले बनाउने छ...
सत्य साईबाबाका वाणीहरू
मेरो छोरी/छोरोले के सिकोस ? –अब्राहम लिंकन
हौसला हुनुपर्छ जिन्दगीमा एकदिन फुल्न सक्छ- मनछुने...
शिखर सम्म पुग्न चाहन्छु तर गलत बाटो बाट हिडु यति...
महान व्यक्तिहरुका महान भनाइहरु – खण्ड एक
उच्च प्रभावशाली व्यक्तिहरूको ७ बानिहरू- जस्ले...